Posted by Moe Hlaing Nya at 9:11 PM4comments
(အမှတ်၅၃၊ ဧပြီလ၊ ၂၀၁၀ ရယ်စရာမဂဇင်း)
( ပင်လယ်နဲ့ပက်သက်နေတဲ့ရွက်တွေကဗျာစာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်)
Posted by Moe Hlaing Nya at 9:30 AM0comments
Posted by Moe Hlaing Nya at 9:31 PM 32 comments
သုညအစ၊ သုညအလယ်၊ သုညအဆုံး၊
ကျွန်တော်က ဘ၀ကိုလွယ်လွယ် မရှုံးချင်ဘူး အမေ…
မျှော်လင့်ချက် အကြီးကြီး ပိုက်ခဲ့တယ် အမေ…..
နံပါတ် (၄၀)ထဲက (၁) လျော့သွားတာ
သွေးဆိုတာ လိုသလောက်တော့ ထွက်ရမှာပဲ…
သား အတွေးက မက်မောမိနေတုန်းပဲ….
တစ် အခြေအနေ၊ နှစ် အခြေအနေ၊ သုံး အခြေအနေ၊
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀က ရေလိုပဲ
အမေသိရင် .. ဘာဖြစ်ဦးမလဲ….
နောက်မာရ်နတ်ကို ထောက်လှမ်းဖို့ ကိရိယာ
အရှေ့မှာ ထယ်ထိုးထားတဲ့ မြေ
ရဲဖို့အတွက် အကုန်လုံးမေ့ခဲ့ရတယ် အမေ…။
“ခင်ဗျား ဘာလို့ မဆက်သွယ်တာလည်း”
“အမေသိရင် စိတ်ဆင်းရဲမှာ ကျွန်တော်မဆက်သွယ်ချင်ဘူး”
တတိယ အကြိမ်မြောက် ခွဲစိပ်မှု
“ငါသေတော့ ငါ့အသုဘ မင်းစီစဉ်
မင်းသေတော့ မင်းအသုဘ ငါစီစဉ်မယ်”
ငါက မင်းအမေပါဘဲ တဲ့လား အမေ…
ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းတယ် အမေ…
သုည တစ်ခြမ်းအပဲ့ ပေမယ့်
ကျွန်တော် မြစ်ကို အလျားလိုက်ဆန်ခဲ့တာကိုး
ကျွန်တော် မရှုံးချင်ဘူး အမေ…
“သား မင်းက အမေ့သားပါဘဲ”
သူဘို့… ကိုယ့်ဘို့ လို့မတွေးဘူး အမေ
သား ငြိမ်းချမ်းရေးကို ချစ်တယ်…
တစ်ချစ်တယ်၊ နှစ်ချစ်တယ်၊ သုံးချစ်တယ်…
ကျွန်တော့် အပင်လေး ရှင်သန်စေချင်တယ်
ကျွန်တော် အစစ်အမှန်ကို ရှင်သန်စေချင်တယ် အမေ…
ကျွန်တော် (၁၅) နှစ်လုံးလုံး
ရက်ပေါင်း (၁၂၀) ကျော်ကာလ
ငါ… မရှုံးစေရဘူး.. ဟေ့…
မဖြစ်၊ မဖြစ်၊ မဖြစ်တော့ဘူး….
ညီမလေးက .. ပျော်လိုပြုံးလို့
သူပျော်လို့ မျက်ရည်တွေတောင် ကျလို့
အမေ ချစ်တဲ့ အမေ့သားတွေ
အမေ နေရစ်ခဲ့တဲ့ … ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်
Posted by Moe Hlaing Nya at 6:40 AM 1 comments